Kumangale abaningi uHlengiwe Mhlaba elingisa
UMCULI wowokholo, uHlengiwe Mhlaba, ekwesinye seziqephu seThe River alingisa kuyo Isithombe: TWITTER
UMCULI wokholo uHlengiwe Mhlaba uthi kukhona owamtshela ukuthi indlela abusebenzisa ngayo ubuso uma ekhuluma angase enze kahle ekulingiseni kodwa akangamnaka.
Kuleli sonto, lo mculi wodumo ngezingoma okubalwa kuzo ethi Jesu Uyalalela, ubonakale emdlalweni iThe River kwi-1Magic. Ubedlala indawo kababekazi uJumayma.
Udlala kwiThe River nje, phambilini uke wabonakala ecula emdlalweni Uzalo kwiSABC 1.
"Kudala sake sathi sihleli kwaba khona othi kimi kungangifanela ukulingisa. Ngathi uma ngibuza wathi ngoba ubuso ngendlela engibusebenzisa ngayo, buyakwazi ukukhombisa isimo nento engiyishoyo. Ngamtshela ukuthi akame kancane ngoba ngangingayizwa kahle into ayeyisho," kusho uHlengiwe.
Uthe akazi kwenzeka kanjani ukuthi angene kuZalo ngoba akaze acele muntu ukuthi abonakale kulo. NakwiThe River futhi uthe yibo abamcelile ngoba akanaye ngisho nomphathi omfunela imisebenzi yokulingisa.
"Ngabuza ukuthi yini abayifuna kumlingiswa wami, bangitshela ukuthi akazwani kakhulu noZodwa (Winnie Ntshaba). Ngangingazi nokuthi ubani uZodwa base beyangichazela. U-Aunt Jumayma akawubambi umshini," kuchaza yena, uwumuntu ongazwani nento ebhedayo.
Kulezi zinsuku iziqephu zomdlalo ziqoshelwe KwaNgcolosi, KwaZulu-Natal.
Uthe ushaqekile uma esezibona futhi nendlela abantu abayamukele ngayo indawo yakhe.
"Ngiyazibuza ukuthi ukuphi uHlengiwe lapha? Sekuwumama nje wasemakhaya ongawubambi umshini. Sisenezingxoxo manje ukuze indawo yami iqhubeke ngoba abantu babonile bamangala ukuthi kanti kunekhono elifihlakele nami ebengingalazi."
Uthe izincomo zabantu ziyamgqugquzela ukuthi angasabi ukwenza ezinye izinto ngaphandle kokucula.
Ubonge uWinnie nabanye abalingisi ngokumamukela kahle futhi benza umsebenzi wakhe waba lula.
"Ukulingisa akuwona ubukhazikhazi lobu thina esisuke sibubona. Kuyasetshenzwa. Zonke izinsuku kumele uqhamuke nento entsha akufani nathi. Thina sisebenza kakhulu uma sisaqopha bese silokhu siphindaphinda into eyodwa uma sesicula," usho kanje.